Hetsika tolo-tanana : adin-kiragasy hanampiana an’i Andry Ratovo | NewsMada
Hetsika tolo-tanana : adin-kiragasy hanampiana an’i Andry Ratovo
Miantso fanohanana sy fanampiana. Hifampitady any Mangamila, Anjorobe, ny 24 jona izao,
ireo mpanao hiragasy kalaza, hifanandrinan’ny tarika Rafidison Betsinjaka sy Robinson. Natao izany hetsika izany mba hoentina mitsabo ny mpanao gazety, Andry Ratovo. Nanome alalana maimaimpoana sy nikarakara ary nandrindra izany ny ben’ny Tanàna ao an-toerana, R. Hajason.
Tsiahivina fa hanampiana amin’ny fanaovana “dialyse” indroa isan-kerinandro tsy maintsy atao amin’ity mpanao gazety ity ny vola ho azo amin’izany. Mbola etsy amin’ny HJRA ao amin’ny sampana “réa-nephrologie”, sokajy faharoa, manaraka fitsaboana ny tenany amin’izao fotoana izao. Mandany 7 hetsy Ar isan-kerinandro ny fianakaviana, ankoatra ny fividianana fanafody.
Manoloana izany, mbola manao antso avo amin’ireo malalatanana izy ireo mba hanampy sy hanohana izany amin’ny alalan’ireto laharan-telefaonina ireto : 033 85 368 78 sy ny 034 31 005 63. Maneho fisaorana sahady ireo vonona ho amin’izany ny fianakaviana.